‘बाँकेको विकासका लागी मेरो उम्मेदवारी हो’ | Chhinchhin Khabar
‘बाँकेको विकासका लागी मेरो उम्मेदवारी हो’
६ मंसिर २०७४, बुधबार २३:१४
उम्मेदवार, एकिकृत राप्रपा(राष्ट्रवादी), प्रतिनिधी सभा-२ बाँके
चुनाव प्रचार प्रसार अभियान कस्तो चलिरहेको छ ?
चुनाव प्रचार–प्रसारको अभियानलाई तिव्रताका साथ अघि बढाईएको छ । गाँउ–गा“उमा जाने मतदातालाई भेट्ने र आफ्नो चुनावी एजेण्डा पेश गर्ने, बेलुकापख नगरका विभिन्न क्षेत्रमा जाने मतदातासँग भेट्ने काम भइरहेको छ ।
मतदातालाई भेट्दा के भन्छन् ?
मतादाताहरु धेरै तनावमा छन् । धेरै नेतालाई हे¥यौं, विकास हुन सकेन भनेर उनीहरु दुःख सुनाउँछन् । समाजका विभिन्न समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि सबै क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन । जनताले यही सबैको विकास हुनुपर्छ, यो सबैका लागी तपाई नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने मतदाताहरुको माग छ ।
तपाई मुख्य रुपमा के–के एजेण्डा बोकेर जनता माझ जानु भएको छ ?
हामीले राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका मुद्दा जनता समक्ष लगेका छौं । सबै जातजाति, धर्मको सम्मान हुने गरि सनतान हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा छ । राजसंस्था राष्ट्र प्रमुखका रुपमा हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्छ र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने कुराको जोडदार रुपले हाम्रो पार्टी उठाईरहेको छ । यसका साथै प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी नेपालगन्ज हुनुपर्छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्तर उन्नती, कम ब्याजदरमा कृषकलाई सामाग्री उपलब्ध गराउने, नगरमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, अब्यवस्थित पार्किङको ब्यवस्थापन, अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण, खुल्ला सिमानालाई ब्यवस्थापन गरि सुरक्षा दिने लगायत एजेण्डा छन् ।
यदी तपाईले जित्नु भयो भने यि एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सम्भव होला त ?
बिल्कुल सम्भव छ । हामीले हावा गफ गरिरहेका छैनौं । हामीले मनन् गरेर जनताका माँझ प्रस्तुत गरेका हौं । एजेण्डालाई अक्षरस पालना गरि त्यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्छौं । यो विषयमा कुनै शंका नै छैन की हाम्रो एजेण्डा नै नेपाली जनताको हो ।
तपाईको उम्मेदवारीलाई मतदाताले के भन्छन् ?
युवा अवस्थामा मैदानमा आउनु भएकोमा मलाई सबैले स्वागत गरिरहनु भएको छ । युवा जोश, जाँगरमा देश र समाजमा विकासको मूल फुटाउने दक्षता राख्ने भएकाले मलाई मतदाताले हौसला दिईरहनु भएको छ । साथै उहाँहरुले यसपटक जिताउने बचन पनि दिनु भएको छ ।
तपाईको पार्टीले राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको छ, जनताले एकपटक फालिसकेको राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै गर्दा मत परिणाममा प्रभाव पार्दैैन ?
राजसंस्था जनताले फालेका होईनन् । राजसंस्था संसदले विघटन गरेकोले संसदका रुपमा हुनुपर्छ । निरकुंश प्रवृत्तीको अन्त्यका लागि २०६२/६३ मा नारा लागेको हो । राजसंस्था हटाउनका लागी थिएन् । राजसंस्था भनेको राष्ट्रिय चरित्र भएको संस्था हो । जुन संस्थाले हिमाल, पहाड, तराईलाई भावनात्मक सम्बन्धमा जोड्ने काम गर्छ । यो संस्था कहिले पनि गलत भएन् । देश र जनताको भलोका लागी राजसंस्थालाई प्रयोग गर्ने हो । संस्था कहिले पनि खराब हुदैन । संस्थामा रहेका ब्यक्ति खराब हुन्छन्, ब्यक्ति नै खराब भएपछि २ सय ४० वर्ष लामो ईतिहास बोकको राजसंस्था नै सखाप पार्नु न्याय संगत कार्य होईन् । यो हाम्रो सम्पत्ती हो, जसलाई बचाई राख्न प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तब्य र अधिकार हो । राजसंस्था सबै नेपालीको अभिभावक हो, भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाई छ ।
वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले तपाईलाई कत्तिको कठिन भएको छ ?
निजी स्वार्थमा गरिएको यि गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन हुन् । वाम गठबन्धनभित्र एउटा उघ्र क्रान्तिकारीका रुपमा माओबादी छ, भने अलिकम क्रान्तिकारी एमाले छ । यि गठबन्धन अपवित्र छन् । बढीमा यि गठबन्धन निर्वाचनसम्म मात्र सिमित रहन्छन् । जनताले धेरै परेसानी भोग्नु परेको छ । एमालेका थुप्रै कार्यकर्तालाई यो गठबन्धन मनपरेको छैन, भने त्यतिकै माओबादीमा पनि देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि निजी स्वार्थकै लागी बनेको गठबन्धन हो ।
निर्वाचनमा तपाईले के चुनौती देख्नुभएको छ ?
अहिलेको माहोल भनेकै हाम्रो पक्षमा छ । एकिकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रबादी)कै माहोल छ । हामीलाई चुनौती त्यस्तो खासै छैन, तरपनि चुनौती छैन भन्न मिलेन् । ठूला पार्टीका सामु चुनौतीका साथ सामना गरिरहनु परेको छ । उनीहरु पैसाको ठूलो चलखेल गरि मतदातालाई प्रभावित पार्ने, बहकाउने, खरिद बिक्री गर्ने सम्म पुगेका छन् । विभिन्न धम्की, डर, लोभ देखाई जनतालाई हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ ।
अब अन्त्यमा, तपाईले जितेपछी नेपालगन्जका लागी के गर्नुहुन्छ ?
मैले जितेपछी क्षेत्र नम्बर २ मा विकासका मुल फुट्छन् । हाम्रा आँखाअघि भएका सबै समस्याहरु ट्राफिक ब्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, बजार ब्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय, सबैलाई करको दायरामा ल्याई छुट, नगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा छुट एवम् लगानीको प्रबन्ध मिलाउने छौं । र सबैलाई एकिकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रबादी)को चुनाव चिन्ह चारकुना बाकसभित्र रहेको हलोमा अत्यधिक मतदान गरि विजयी गराउन अनुरोध गर्दछु ।
Previous articleएकिकृत राप्रपा(राष्ट्रवादी)का उम्मेदवार कँडेल भन्छन् :– ‘मैले जे बोल्छु, त्यही गर्छु’
Next articleबाँकेको सीमामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती
विपी अध्ययन प्रतिष्ठानले बिरामीलाई दियो स्वास्थ्य सामाग्री तथा जनचेतनामूलक पम्पलेट
सरिताको ठाउँमा सांसद बनिन् लीला सिटौला
नेपाली कांग्रेस राप्तीसोनारी पार्टी कोष निर्माण गरिने
बिपी दिवसमा वृक्षारोपण
विभिन्न पार्टी परित्याग गरी ४७ जना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश
साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी सरिता गिरीलाई कारबाही, उनको ठाउँमा लीला सिटौला
तरुण दल कोहलपुर नगर समितिले बुझायो ९ बुँदे ज्ञापन पत्र
नागरिकता विधेयक पारित, विपक्षी दललगायत नेकपाकै नेताको असहमति
बाँके कांग्रेसले बुझायो सरकारलाई ज्ञापन पत्र
नयाँ नक्सा निशान छापमा समेटियो, संविधान संशोधन सर्वसम्मतले पारित
किम जोङबाट हमला भए उनको हत्या गर्न टोली तयार छः दक्षिण...
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा
बनगाड खोलाले माइक्रो बस बगायो यात्रु हामफालेर ज्यान जोगाउन सफल